Kulan ku aaddan adkaynta amniga Puntland oo maanta ka dhacay Garowe. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2012 8:55 b 0
Garowe, July 30 ? Waxaa maanta (Isniin ah) lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland kulan ballaaran oo la xiriiray sugidda nabadgalyada deegaannada Puntland, kaasoo ay ka qaybgeen hay?addo dawli ah, kuwa caalami ah iyo sidoo kale kuwo maxalli ah intuba.
Shirka oo ka dhacay xarunta wasaaradda hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa waxaa hay?adihii dawliga ahaa ee ka qaybgalay ka mid ahaa wasaaradaha amniga, caddaaladda, saraakiisha ciidanka nabadgalyada, wakiillo ka kala socday hay?adaha UNDP iyo WAWA, mas?uuliyiin ka socday maamullada heer gobol iyo bulshada caadiga ah.
Kulanka oo ay qabashadiisa iska garabsanayeen wasaaradda amniga Puntland, hay?adda UNDP iyo dalladda waddaniga ah ee WAWA, ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka Puntland iyo sidii loo xoojin lahaa, waxaana la is-tusaaleeyey gufaynta god-daloolooyinka liicsanaaneed ee xagga amniga, iyadoo dadweynahana ay dawladdu ku dhiiro-galisay in ay ka shaqeeyaan dhawrista amnigooda.
Madaxdii dawladda ee shirkaasi ka qaybgalay, gaar ahaan kuwa wasaaradda amniga ayaa si durugsan u faahfaahiyey heerka xaaladda ammaan ee deegaannada Puntland ay marayaan, iyagoo muujiyey falalkii ammaan darro ee illaa sannadkii tagay ka dhacay Puntland, ayna ku nafwaayeen haldoor badan oo iskugu jiray hay?addaha dawladda, odayaasha dhaqan iyo wax-ku-oolka kale oo bulshada Puntland ah.
?Amniga ciidamadu kuma filna, wasaaradda ammaankuna kuma filna, sababtoo ah waa mas?uuliyad qofkasta oo reer Puntland ah xil ka saaran yahay, loogana fadhiyo sidii uu amniga iyo nabadgayada u dhawri lahaa, ciidamadana gacan ugu siin lahaa sugitaankeeda? wasiir kuxigeenka wasaaradda ammaan Cabdirisaaq Xareed Ismaaciil.
Shalay sidaan oo kale waxaa xarunta dawladda hoose ee magaalada Garowe loogu qabtay kulan kale oo amniga ku saabsanaa oo isna wasiiro iyo wakiillo kala duwani ay ka qaybgaleen, waxaana kulamada lagu dardargalinayo xoojinta amnigu ay ku soo beegmayaan iyadoo hal maalin oo kaliya naga xigto xuska maalinta 1-da Agoosto oo ah maalin si weyn looga maamuuso deegaannada Puntland, haatanna uu socdo diyaar-garawgeedu.